အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုမ္ပဏီ - Flydis
ကျွန်ုပ်တို့၏လက်ဆွဲ FCL Shipping နှင့် LCL Shipping Service ဖြင့်, သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကို FBA သိုလှောင်ရုံသိုမဟုတ်ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးအလွယ်တကူတင်ပို့နိုင်သည်
Courier နှင့် Air service
UPS Courier ကိုသုံးပါ, DHL Courier, သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိ FBA သိုလှောင်ရုံသို့တင်ပို့ရန် Fedex Courier နှင့် TNT Courier service နှင့်လေကြောင်းဖြင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး.
အမေဇုံဘားကုဒ်လိုအပ်သောအရည်အချင်းပြည့်မီသောထုတ်ကုန်များအတွက်, Amazon မှပြည့်စုံစွာဖြည့်ဆည်းခြင်းသည်တစ်စုံတစ်ရာသောအဖိုးအခအတွက်သင့်အတွက်ထိုဘားကုဒ်များကိုအသုံးပြုနိုင်သည်. သင့်ကိုငွေနည်းနည်းသက်သာစေရအောင်!
အမေဇုံ FBA လည်းအမေဇုံရဲ့သုံးအဓိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်.
အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Giants: လေးယောက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ Courier ဖြစ်ကြသည်: DHL, ယူပီအက်စ်, TNT, Fedex
သင်၏ပစ္စည်းများကိုသင်၏ပေးသွင်းသူများထံမှရှန်ကျန်းသို့မဟုတ် Dongguan တွင်ရှိပါကကျွန်ုပ်တို့စာရင်းကောက်ယူပါမည်, သို့မဟုတ်အခြားကုန်ပစ္စည်းများရှိပါကသင်၏ပေးသွင်းသူများအားကျွန်ုပ်တို့ထံတိုက်ရိုက်ပို့ပေးပါ.
အမေဇုံ၏လိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီရန်သင်၏ထုတ်ကုန်များကိုပြင်ဆင်ရန်သင်လိုအပ်သမျှကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးသည်. ဝန်ဆောင်မှုများတံဆိပ်ကပ်ခြင်းပါဝင်သည်, Poly အိတ်, အထုပ်, ပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်း, သို့မဟုတ်လိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးအခြားအရာအားလုံး.
သင်၏စာရင်းကို DHL မှ Amazon Warehouse သို့ပို့ပေးပါ, ယူပီအက်စ်, လေ, သင်၏လိုအပ်ချက်ပေါ် မူတည်၍ ရထားသို့မဟုတ်ပင်လယ်ဖြင့်ပါ. ကျနော်တို့ထုံးစံရှင်းလင်းရေးအပါအဝင်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးလွှဲပြောင်းယူ, အခွန်.
Professional ကသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးန်ဆောင်မှု, အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးန်ဆောင်မှု သိုလှောင်ဝန်ဆောင်မှု, စသည်တို့.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အလီဘာဘာ၏ရွှေအသိအမှတ်ပြုကုမ္ပဏီဖြစ်သည်. တစ် ဦး တည်းသာအားကောင်းတဲ့ကုမ္ပဏီဒီအရည်အချင်းများရှိပါတယ်. ကြှနျုပျတို့မှာ ... ရှိသညျ 11 ရေကြောင်းအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်း, နှင့်ရေကြောင်းခရီးစဉ်ဘယ်နေရာမှာမဆိုရှိနိုင်ပါသည်, ထိုကဲ့သို့သောသင်၏အိမ်သို့မဟုတ်အမေဇုံဂိုဒေါင်အဖြစ်.
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဂိုဒေါင်သို့လုံခြုံစွာသယ်ယူပို့ဆောင်ရန်သင်၏ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူနှင့်ဆက်သွယ်ပါမည်, ဝယ်သူလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီထုတ်ကုန်ကိုသတ်မှတ်ထားသော ဦး တည်ရာသို့ပို့ရန် DAP သို့မဟုတ် DDP သို့မဟုတ်အခြားနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုပါ.
ကျွန်ုပ်တို့သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းဝန်ဆောင်မှုများကိုထောက်ပံ့ပေးသည်, အများအပြားဖောက်သည်အသုံးပြုနေကြသည်. စက်ရုံများသည်ကုန်ပစ္စည်းများအားလုံးကိုသေချာစွာမစစ်ဆေးပါ, အရာထုတ်ကုန်ရောင်းပြီးနောက်ညံ့ဖျင်းသောအကဲဖြတ်ဖို့ ဦး ဆောင်လမ်းပြလိမ့်မည်. ကုန်ပစ္စည်းအရည်အသွေးကိုသေချာစေရန်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အညီကုန်ပစ္စည်းများကိုသေချာစွာစစ်ဆေးပါမည်.
DDP လေကြောင်းလိုင်း - တရုတ်တိုက်ရိုက်ပျံသန်း
DDP လေကြောင်းလိုင်း - ဟောင်ကောင်တိုက်ရိုက်ပျံသန်းမှု
DDP ရေကြောင်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး - ရှန်ဟိုင်းဆိပ်ကမ်း
DHL / UPS Express သင်္ဘောများ
FEDEX Express သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
TNT Express သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
EMS Express သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး
ကျွန်ုပ်တို့၏ Clients များသည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအဘယ်ကြောင့်ချစ်ကြသနည်း？
သင်၏တရုတ်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းသည်အချိန်များစွာကုန်သည်. သင်၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုနှင့်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ထံလွှဲပြောင်းပေးခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည်, သင်၏သုံးစွဲသူဝန်ဆောင်မှုတွင်အသုံးပြုနိုင်မည့်အချိန်ပိုရသည်, စျေးကွက်ရှာဖွေရေး, နှင့်ရောင်းအား.
အခြားသူများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သင့်တွင်ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များရှိကြောင်းကျွန်ုပ်တို့သိပါသည် - ဒီတော့, သင်အသုံးပြုသောဝန်ဆောင်မှုများအတွက်သာသင်ငွေပေးချေနိုင်သောစနစ်ရှိသည်. သင်လိုအပ်သည့်အရာတစ်ခုခုကိုမမြင်ရပါ? ငါတို့အဖွဲ့ကိုအသိပေးရုံသာမကငါတို့အတွက်အဖြေတစ်ခုထုတ်ပေးလိမ့်မည်!.
သင်၏ကုန်ပစ္စည်းအားပြိုင်ဆိုင်မှုသို့မဟုတ်ခိုးယူရန်ကြိုးစားသူတစ် ဦး မှသင်ကာကွယ်ရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်. ကျွန်ုပ်တို့သည်သင်၏ထုတ်ကုန်များကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းနှင့်ပို့ဆောင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်မှတဆင့်လျှို့ဝှက်ထားသည့်အတွက်သင်၏လျှို့ဝှက်ချက်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လုံခြုံမှုရှိသည်.